mardi, 09 novembre 2021 20:36
Ny antony mampiakatra ny vidin'ny vy sy ciment
Betsaka hoy ireo mpanohana fanjakana ny fanamboarana fotodrafitrasa ataon'ny fitondrana ankehitriny, ka dia lasa any daholo ny vy sy ny ciment, ka izay no mampiakatra ny vidin'ny fitaovana fanamboaran-trano, lalànan'ny tolotra sy tinady.
Ny mahagaga ahy anefa ny "teinte Orange" tsy niova ny vidiny, nefa iny aza no tena nampiasaina, satria na ireo trano marobe efa niorina aza dia tapitra nolokoina volomboasary aby.
mardi, 09 novembre 2021 18:50
Habakabaka : Tafaverina ety an-tany Crew-2 SpaceX rehefa teny ambony teny nandritra ny 200andro
Niantsona teny amin'ny 400km ambonin'ny tany, ka nipetraka tao amin'ny station spatiale internationale ISS ireo astronaute 4 mianadahy, frantsay Thomas Pesquet, Japonais Akihiko Hoshide ary Amerikanina roa Shane Kimbrough sy Megan McArthur nandritra ny 6 volana.
Niala ny ISS omaly alatsinainy 08 novambra 2021 izy ireo, ary tafaverina ety an-tany vao maraina androany talata 09 novambra 2021, raha niodidina ny Station ISS aloha izy ireo, nandritra ny 1ora sy sasany, naka sary ny station ahitana ny mety fisian'ny fahasimbana vokatr'ireny météorite na vato manidina midona aminy ireny.
Izay vao nizotra nihazo ny tany amin'ny hafainganam-pandeha 27 000km/ora.
naharitra 7min teo ny fidirana ny atmosphère izay miteraka hafanana hatrany amin'ny 1800°C, izay ilana ny fiarovana ilay Capsule misy azy 4 mianadahy ireto, satria dia tapaka koa eo ny fifandraisana rehetra.
Afaka izay, dia nisokatra ny elon'aina lehibe 4, nampidina azy ireo ny fari-dranomasin'i Golfe du Mexique manamorona an'i Floride, Amerika, ka dia nisy sambo sy angidimby nitsena azy ireo.
mardi, 09 novembre 2021 18:48
Ambatondrazaka : Misy vokatra menaka 250 litatra isan'andro
Voanjo 5 taonina isan'andro no ahodina orinasa madinika iray ao Ambatondrazaka, ka hamokarany menaka 250 litatra.
Manome asa an'olona 30 eo ity orinasa ity, araka ny hita nandritra ny fitsidihana nataon'ny DRICC Alaotra Mangoro omaly, ary misy mpandray avokoa na ny menaka na ny faikan'ny voanjo avy nakana menaka, milanja 3,5 taonina, avoakany.
Mampirisika mpandraharaha toy izany, ny minisitera misahana ny indostria hiditra ao amin'ny Taninketsa Indostrialy, mba hitondra fampandrosoana any ifotony.
Hitondra fanamaivanana ho an'ny andavanandron'ny mponina ireo mpamokatra entana ilaina andavan’andro na PPN, sy ireo mpanodina vokatra ho sakafo.
mardi, 09 novembre 2021 09:45
Fanambaràn'ny filohan'ny HCC teo aloha Jean Eric Rakotoarisoa
Taorian’ny fanambaràna izay mandiso tanteraka ny zavatra nolazaiko dia tiako ny mitondra ireto fanazavàna ireto :
Nisy ny resaka nifanaovako tamin’ny mpanao gazety izay niresahana momba ny fanapahan-kevitra noraisina taorian’ny toe-draharaha nitranga teto amin’ny firenena ny 21 aprily 2018. Ny voalazako tamin’izany horonam-peo izany anefa dia niniana notapahina sy navadika ho resaka mahakasika ny voka-pifidianana ho Filoham-pirenena natao tamin’ny taona 2018.
Averiko ary hamafisiko hatrany, fa ny didim-pitsarana izay navoakan’ny Fitsarana Avo Momba ny Lalàm-panorenana izay nifandraika tamin’ny famoahana ny voka-pifidianana tamin’ny fifidianana ho Filoham-pirenena natao tamin’ny taona 2018 dia maneho marina ny safidin’ny maro an’isa, ary nifanaraka tanteraka tamin’ny zava-nisy rehetra nandritra iny fotoam-pifidianana iny rehefa natao ny fandinihana sy ny fanaraha-maso araky ny voasoratra amin’ny lalàna velona.
Niombon-kevitra tanteraka tamin’izany didim-pitsarana izany ireo mpiara-miombon’antoka amin’i Madagasikara fa indrindra ireo mpanara-maso ny fifidianana na ny avy eto an-toerana na ny avy any ivelany, niara-nanaiky ny fahatomombanan’ny fizotran’ny fifidianana sy niara-nankatoa ny vokatr’izany.
mardi, 09 novembre 2021 09:26
Fandraharahana : Manana anjara feno ao anatin'ny fandaharanasa Taninketsa Indostrialy ny tanora
Nisokatra ny 08 Novambra 2021 ny herinandro manerantany natokana ho an'ny fandraharahana (GEW) izay natrehan'ny Minisitry ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra ary ny Fanjifana Edgard Razafindravahy, sy ny Minisitra Lefitra misahana ny Tanora Juliana Ratovoson.
Tsy latsa-danja amin'izany fankalazana izany i Madagasikara. Manohana tanteraka ny tanora hiroboka anatin'ny tontolon'ny fandraharahana ny minisitera ho fampandrosoana sy tombontsoan'ny ny firenena.
Nibahana nandritra ny fanokafana ny GEW 2021 ny fahavononan'ny fanjakana hanome fanampiana ireo tanora manana tetikasa manodidina ny fandaharanasa Taninketsa Indostrialy. Tanjona ny fampiroboroboana sy fampitomboana ny famokarana ifotony.
mardi, 09 novembre 2021 08:53
Hery Rajaonarimampianina : Miantso fitoniana sy ny hamoahana ireo gadra politika
Any Frantsa ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina ankehitriny. Iray volana taorian’ny nahavitan’ny famindram-pahefana tamin’i Andry Rajoelina ka anaovan’ity farany fihanianana amin’ny maha filoham-pirenana voafidy ara-demokratika azy, i Hery Rajaonarimampianina no niala teto Madagasikara. Nambarany fa safidiny izany.
Nisy ny faran’ny herinandro teo ny fankalazana ny tsingerintaona nahaterahany, ny 6 novambra, nanotronan’ireo namany, mpiara-miasa akaiky taminy ary koa mpikambana HVM izay antoko noforoniny.
Nandritra io fotoana io no nanaovany antso amin’ny mpitondra fanjakana mba hampitsahatra ny fanenjehana ara-politika hisian’ny fitoniana, ary koa hamoahana ireo gadra politika.
Niantso ny mpikambana HVM hanamafy ny tanjaky ny antoko, mialohan’ny hiatrehana ny fifidianana Filoham-pirenena amin’ny 2023, izay handraisan’ny HVM anjara araka ny nambarany.
mardi, 09 novembre 2021 08:52
mardi, 09 novembre 2021 07:52
Antsiranana : Nidina an-dalambe ny mpiasan'ny SECREN
Nidina an-dalambe ny mpiasan'ny orinasa SECREN ny alatsinainy maraina 08 novambra 2021, ary nitokona nanoloana ny Hôtel de Ville Antsiranana.
Miaramila no nitsena azy ireo sady nandroaka no nisambotra ny mpitarika miisa roa.
Mitaky fandoavana ny karama sy ny tombontsoa ary koa ny hialan'ny Tale jeneralin'ny SECREN ireo mpiasa mitokona ireo.